Kedu mgbe SEO ruru $ 100 Million? | Martech Zone
Ruo ugbu a, ejighi m n'aka na achọtala m akwụkwọ akụkọ ederede zuru ezu na ịlele uru nke njikarịcha nchọta ọchụchọ ruo mgbe ị gụrụ akwụkwọ a. Etu esi aba uru SEO. Enwere ụfọdụ saịtị ndị ọzọ mepụtara yiri akwụkwọ ọcha, mana nke a bụ oge izizi m hụrụ ka akọwara ya maka onye nwere MBA ka ọ ghọta nke ọma.
Ihe odide ahụ na-ejegharị onye ọ bụla na-agụ ya, site na iji mpempe akwụkwọ na ngwa ọrụ dị na Google, iji nyochaa ma gbakọọ uru nke ịnye ọkwa. Agụnyere na akwụkwọ ọcha ahụ:
Inweta ọnụ ahịa SEO dị ka nyocha Comp
Kwa Afọ Uru nke Google Page izizi
Kwa Afọ Uru nke Mbụ Page ogo N’ime Ngwa Nchọgharị Niile
Kwa Afọ Uru Ogologo Ogologo Ntọala nrụpụta
Inweta ọnụ ahịa Organic Ogologo Oge Ọdịdị
Cu gbakọọ Uru Ugbu a nke ọkwa mbu
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe uru kwa afọ nke ibe mbụ Google ingnye ọkwa bụ maka asọmpi asọmpi dị ka Health Insurance? Kedu ka ọ dị $ 7,471,194 ụda? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ ga-efu, agbanyeghị, ịkwado ma merie mgbasa ozi zuru ezu iji nweta ọnụ ọgụgụ nleta kwa afọ (840k na $ 8.90 kwa pịa). Na Afọ Ise Net Net Uru na-akpali nọmba ahụ ka ọ fọdụ nke nta $ 100,000,000. (You'll ga-agụ akwụkwọ akụkọ iji ghọta ihe kpatara nke ahụ bụ nyocha ziri ezi).
SEO gị nwere ike ọ gaghị aba uru, mana oge eruola ka ị kwụsị iche banyere njikarịcha njin ọchụchọ dị ka ego ahịa ọzọ wee bido ịmalite ịtụ ya anya dịka itinye ego nke nwere ike gbanwee ụlọ ọrụ gị - ọkachasị na akụ na ụba a.
The atụmatụ ego maka ụlọ ọrụ iji nweta ogo peeji mbụ maka Health Insurance is $ 200,000 n'afọ mbụ na $ 50,000 kwa afọ mgbe iji debe ogo. Nke ahụ dị mma nke ukwuu laghachi azụmaahịa na nkpuru ego nke ihe o gha ewe iji nweta otu uzo ahia na usoro mgbasa ozi.
Download na akwụkwọ ahụaja site na Slingshot SEO.
Jul 21, 2010 na 9: 57 AM
Ihe kachasị amasị m banyere akwụkwọ akụkọ SEO a bụ na ejiri ntụnyere na-egosi ihe ọzọ - Adwords. Ebee ka inwere ike ikwalite mgbasa ozi Adwords gị, nke ahụ bụ ọnụ ahịa na-aga n’ihu. Akwụkwọ a na-atụle ndị ahụ dara, ahịa ahịa n'ihu na mgbe ịkwụ ụgwọ ga-abụ.
Akwụkwọ a na - akwalite uru uru nke ogo dị elu, mana azụmaahịa ahụ ka ga-eche site na ọtụtụ iberibe n'ihu na otu ha si emetụta nkwụnye ego ahụ;
% nke ndị nabatara bụ ndị tụgharịrị n'ezie mgbe ịpịrị
Ndụ nke onye ahịa ahụ
Kedu usoro nke nwere akara # 1 ga - eweta ire
Ka anyị kwuo na ị nwere oke ebumnuche, uru bara uru ma ị nweta ezigbo ntụgharị 35% (na-eduga ire ere) ozugbo onye ọrụ ahụ rutere peeji ọdịda ahụ - Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 7.5 nde nyocha nyocha bụ $ 2.6 nde kama.
Ihe dị ukwuu banyere Slingshot SEO, na onye na - enye aka na oke uto ha, bụ na ha ga - ewepụ ndị ahịa mgbe ọnụahịa maka edepụtara aha ha na nkwụnye ụgwọ anaghị enwe isi.